Buufinta Ayaxa dul degay deegaanno ka tirsan Puntland oo maanta billowday +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Buufinta Ayaxa dul degay deegaanno ka tirsan Puntland oo maanta billowday +(SAWIRRO)
Buufinta Ayaxa dul degay deegaanno ka tirsan Puntland oo maanta billowday +(SAWIRRO)
Nugaal (Halqaran.com) – Diyaaradahaan oo dhawaan Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ay ku wareejisay Puntland ayaa waxaa ay buufinta Ayaxa Maanta oo Talaado ah ka bilaabeen deegaanka Godobjiraan ee Gobolka Nugaal.
Deegaanka ay buufinta ka billaabeen ayaa todobaadyadii la soo dhaafay waxaa dhibaato daran ku haayay Ayaxa, waxaana dadka deegaankaas ay sheegeen in beero badan uu baabi’iyay, isla markaana ay Cabasho u gudbiyeen Madaxda Puntland.
Diyaaradaha buufinta ka bilaabay deegaannada Puntland oo ah laba kamid ah kuwa qumaatiga u kaca ee Helicopterka ayaa waxaa 15-kii Bishaan ay gaareen Magaalada Garoowe, waxaana Mashruucaas lagu buufinayo Ayaxa si wadajir ah u maalgelinaya Hay’adaha FAO iyo USAID, waxaana fulinaysa dowladda Federaalka Soomaaliya.
Buufinta Ayaxa ee deegaannada ka tiran Puntland ayaa waxaa ay socon doonaan muddo 10 Cisho ah, waxaana sidoo kale ay buufin ka sameyn doonaan deegaannada Maamullada, Galmudug, Hir-Shabeelle, Jubbaland iyo Somaliland.
Deegaanno ka mid ah dhulka beeraha ee Gobolada dalka Soomaaliya, ayaa waxaa ku habsaday ayax dhibaato ku haayo beeraleyda.